အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ နေရာမှာ တခြားလူသာဆိုရင် ဒီလို အဖြေထွက်ပါ့မလား . .? မေးခွန်းပေါင်းများစွာ. .ဖြေပါ ! - Myanmar People Alliance
အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ နေရာမှာ တခြားလူသာဆိုရင် ဒီလို အဖြေထွက်ပါ့မလား . .? မေးခွန်းပေါင်းများစွာ. .ဖြေပါ !
(၁)လူမြင်ကွင်းမှာ ဖမ်းဆီးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာနဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်ပုတ်ခေါ်ဆောင်ခြင်း၊ (၂)မူးယစ်ဆေးဟုတ်မဟုတ် မသေချာဘဲ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပုဒ်မအပါအဝင် ပုဒ်မတွေတပ်ခြင်း
(၃)အပြစ်မရှိဘဲ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်း (၄)ဂုဏ်သိက္ခာထိပါးနစ်နာစေခြင်း။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူက တာဝန်ယူမလဲ၊ ဘယ်လို တာဝန်ယူမလဲ။ မှားဖမ်းတာ… ဆောရီးနော်ဆိုတာနဲ့ ရမလား…
အခုက မူးယစ်ဆေးလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဖြေထွက်လာပြီ။ သတင်းအမှားပေးတဲ့ သတင်းပေးကို ဘယ်လို အရေးယူမလဲ။
မသေချာဘဲ ဇွတ်ဖမ်းတဲ့ လူတွေရော၊ အထူးသဖြင့် ရိုးရိုးမဖမ်းဘဲ ရှယ်ဇွန်းတပ်ပြီး အခွက်ရိုက်ဖမ်းတဲ့ လက်စွမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးကရော ဘယ်လို အထူးတာဝန်ယူပေးမလဲ နားစွင့်ထားပါရစေနော်…
ခေတ်ကိုက ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရင်း သကြားလုံးက အော်တို ကက်တမင်းဖြစ်ပြီး မျက်ခွက်ရိုက် အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့ခေတ်၊ မရတော့ဘူး… မတရားတွေ ကြည်ညိုနေပြီေ ခြေသလုံးဖက်မိတော့မယ်…အာားးးးးးး။
(၁)လူမွငျကှငျးမှာ ဖမျးဆီးရုံတငျမဟုတျဘဲ မကျြနှာနဲ့ ခေါငျးကို ရိုကျပုတျချေါဆောငျခွငျး၊ (၂)မူးယဈဆေးဟုတျမဟုတျ မသခြောဘဲ ရောငျးဝယျဖောကျကားပုဒျမအပါအဝငျ ပုဒျမတှတေပျခွငျး
(၃)အပွဈမရှိဘဲ ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျထားခွငျး (၄)ဂုဏျသိက်ခာထိပါးနဈနာစခွေငျး။ ဒါတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျသူက တာဝနျယူမလဲ၊ ဘယျလို တာဝနျယူမလဲ။ မှားဖမျးတာ… ဆောရီးနျောဆိုတာနဲ့ ရမလား…
အခုက မူးယဈဆေးလညျး မဟုတျဘူးဆိုတာ အဖွထှေကျလာပွီ။ သတငျးအမှားပေးတဲ့ သတငျးပေးကို ဘယျလို အရေးယူမလဲ။
မသခြောဘဲ ဇှတျဖမျးတဲ့ လူတှရေော၊ အထူးသဖွငျ့ ရိုးရိုးမဖမျးဘဲ ရှယျဇှနျးတပျပွီး အခှကျရိုကျဖမျးတဲ့ လကျစှမျးပွပုဂ်ဂိုလျထူးကွီးကရော ဘယျလို အထူးတာဝနျယူပေးမလဲ နားစှငျ့ထားပါရစနေျော…
ခတျေကိုက ကျောဖီဆိုငျထိုငျရငျး သကွားလုံးက အျောတို ကကျတမငျးဖွဈပွီး မကျြခှကျရိုကျ အဖမျးခံရနိုငျတဲ့ခတျေ၊ မရတော့ဘူး… မတရားတှေ ကွညျညိုနပွေီေ ခွသေလုံးဖကျမိတော့မယျ…အာားးးးးးး။အိပနျဆယျလို